eParewa || Peace and Prosperity » १३ दिनको काजकिरिया ७ दिनमा, न सेता लुगा, न गरुण पुराण, प्रत्येक दिन दिउँसो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम
१३ दिनको काजकिरिया ७ दिनमा, न सेता लुगा, न गरुण पुराण, प्रत्येक दिन दिउँसो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम
२०७५ फाल्गुण २२ गते बुधबार १२:४९
२१ फागुन, पोखरा । हिन्दू परम्पराअनुसार १३ दिनमा सकिनुपर्ने काजकिरिया रविन्द्र अधिकारीको परिवारले मंगलबार ७ दिनमै सम्पन्न गरेको छ । सात दिने काज किरिया पनि सामान्य किसिमबाट गरियो । बुधबार ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी...
२१ फागुन, पोखरा । हिन्दू परम्पराअनुसार १३ दिनमा सकिनुपर्ने काजकिरिया रविन्द्र अधिकारीको परिवारले मंगलबार ७ दिनमै सम्पन्न गरेको छ । सात दिने काज किरिया पनि सामान्य किसिमबाट गरियो ।
बुधबार ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका निवर्तमान पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सामान्य विधिसहित किरिया कर्म मंगलबार ७ दिनमै सकिएको हो ।
दुर्घटनास्थलबाट रवीन्द्रको शव काठमाडौं हुँदै पोखरा ल्याउँदा तीन दिन बितिसकेको थियो । त्यो दिनबाट मृत्यु संस्कार सक्ने समय ४ दिनमात्रै रहृयो ।
न सेता लुगा, न गरुण पुराण !
कम्युनिष्ट नेता अधिकारीको ७ दिने काज किरिया सामान्य एवं प्रगतिशील तरिकाले आयोजना गरिएको थियो ।
व्रतबन्ध गरेका ठूलो छोरा विराजले कपाल फाले पनि कान्छा छोरा स्वराज सानै भएकाले कपाल काटेनन् । न कुनै खलो वा खाना पकाउने थलो, न सेता लुगा, न पराल ओछ्याएर अलग्गै कुनामा बसाइ, न त कुनै ढिकुरो वा पिण्डको व्यवस्था । आमाछोरा एउटै कोठाको फरक ठाउँमा शुद्ध कपडा पहिरिएर बसे । एकछाक सात्विक भोजन गरे ।
सात दिनसम्म दिनहुँ गरुण पुराण वाचन गरिएन । सोमबार एक दिन संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्वसहप्राध्यापक चतुर्भुज शर्माले गरुण पुराणको सारसंक्षेप सुनाएर भने, ‘हाम्रो मृत्यु संस्कार परिमार्जन हुन जरुरी छ ।’
सातदिने काज किरियाका क्रममा प्रत्येक दिन दिउँसो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरेर रवीन्द्रले गरेका कामको चर्चा गरियो ।
काजकिरिया समापनका दिन मंगलबार पोखरामा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भयो । रवीन्द्रले गरेका कामको चर्चासँगै उनीप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दै काज किरिया समापन गरियो । नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा भएको श्रद्धाञ्जली सभामा रवीन्द्रको परिवारजनको सल्लाहमा बाल्यकालदेखिका सहयात्री धनराज आचार्यले ७ दिने काजकिरियाको घोषणा गरे ।
नेकपा गण्डकीले बिहीबार निवासमै श्रद्धाञ्जली सभा गर्दै रवीन्द्रको स्मरण गर्‍यो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायतले परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरे ।
रवीन्द्रको मृत्यु संस्कार ७ दिनमै सकिएपछि फेरि एकपटक यसले धर्म, संस्कृति र मृत्युपछिको संस्कारका विषयमा बहस सिर्जना गरेको धेरैले महसुस गरेका छन् । एकाथरि ठान्छन्, ‘मृत्यु संस्कार १३ दिन नै हुनुपर्छ ।’ तर, अर्काथरि भन्छन्, ‘हाम्रा संस्कार र धार्मिक पद्दतिहरु समयअनुसार परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ ।’
अधिकारी परिवारको भनाइ के छ ?
रवीन्द्र अधिकारीका बुबा आफैं धार्मिक संस्कारमा दख्खल राख्छन् । उनको समेत सहमतिमै एकजना पण्डित बोलाएर सामान्य विधि पूरा गरेपछि ७ दिनको क्रिरियाकर्म सकिएको घोषणा गरिएको हो ।
परिवारजनको भनाइअनुसार पाथीभरा मन्दिर दर्शनका क्रममा दुर्घटनामा परी निधन भएका रवीन्द्र अधिकारी प्रगतिशील काजकिरियाको पक्षमा थिए । रवीन्द्र पत्नी विद्या भट्टराईका अनुसार किरिया कर्म गर्ने समय घटाउनुपर्ने र हाम्रा केही जन्म, मृत्युका विधि, पद्दतिहरु परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर संसदमै आवाज उठाउने अधिकारीले तयारी गर्दै थिए ।
विद्या आफैंले रवीन्द्रको चाहना र सपनालाई सम्झिइन् र मृत्युपछि धेरै दिनसम्म गर्ने संस्कारलाई व्यवहारमै उतारेर ७ दिन मात्रै गर्ने प्रस्ताव उनैले गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित मिति २०७५ फाल्गुण २२ गते बुधबार १२:४९